Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAnna & Cristina
Indawo yokuhlala iCapuccino kumgangatho wesibini kwaye inegumbi lokuhlala elaneleyo elinekhitshi elinezixhobo, igumbi lokutyela kunye nebhedi yesofa.
Indawo yokuhlala iCapuccino kumgangatho wesibini kwaye inegumbi lokuhlala elaneleyo elinekhitshi elinezixhobo, igumbi lokutyela kunye nebhedi yesofa. Ukusuka kwigumbi lokuhlala, unokufikelela kwibalcony enkulu enetafile kunye nezitulo apho unokonwabela ukutya kwakho. Ukongeza, unokufumana igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa.
Ungafikelela kunxweme lwaseSan Felice ngemizuzu emi-5 ngeenyawo kwindlela engumnqantsa emalunga nama-500m.
Kufuphi neflethi, unokufumana indawo yokutyela/ipizzeria kwaye, ngemizuzu emi-5 ngemoto, ungafikelela ezivenkileni.
Ukuchitha usuku olugcwele ulonwabo, iipaki ezidumileyo ezifana neGardaland, Movieland okanye iCaneva water park, zimalunga neekhilomitha ezingama-40. Cela amatikiti athotyiweyo kwindawo yakho yokungena.
Irhafu yabakhenkethi yi-€ 0,60 ngomntu ngamnye ngosuku
Umbuki zindwendwe ngu- Anna & Cristina
Yindlu enomntu ohlala kuyo.
Sisoloko sikulungele ukunceda. Unganditsalela ku-Airbnb, ngeselula okanye nge-imeyile - nokuba yeyiphi na indlela elula kuwe!
Siyakuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na into onokuyidinga, ukunika iingcebiso kunye nokwabelana ngolwazi lwasekuhlaleni.
UAnna & Cristina yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Felice del Benaco